musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Dutu Hurricane paCollision Course neNew York
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Dutu Hurricane yakaramba iri munzira yekuNew York kutanga Svondo. Pakutanga kunaya kwemvura kwakange kwatokonzera mafashama makuru muiyo Big Apple Mugovera manheru. Subway nemugwagwa traffic yakauya kuzomira.
Dutu Hurricane rakatanga kufamba pamusoro peKumaodzanyemba Svondo mangwanani,
Mvura yakasimba yakange yatorova nzvimbo zhinji, ichikonzera mafashama dange.
Kudonha kunotarisirwa kwaHenri kuLong Island, New York kana kumaodzanyemba kweNew England kunonoka Svondo mangwanani kana kutanga kwemasikati kunotarisirwa kuwedzera kumatambudziko kunzvimbo zhinji dzakapoteredza.
Kubva Svondo mangwanani na5.30 am EST, Henri aive mamaira zana nemakumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweMontauk Point, New York, aine 120 mph mhepo dzakasimba, iyo National Hurricane Center (NHC) akadaro. Yakanga ichifamba kuchamhembe ingangoita 18 mph.
Nyevero yedutu yaive ichinyanya kuitika kumatunhu mazhinji eLong Island pamwe nezvikamu zveConnecticut neMassachusetts neBlock Island.
Iko kusanganiswa kwedutu rekuyambira kunyeverwa uye mawachi aive aripo munzvimbo zhinji yeLong Island neMassachusetts pamhenderekedzo.
Dutu Rinowedzera Nyevero riri kushanda ... , uye Block Island A Storm Surge Watch iri kushanda ye ... * East Rockaway Inlet kuenda kuMastic New York * Kumusoro kweChatham Massachusetts kuenda kuSagamore Beach Massachusetts * Cape Cod Bay Yambiro yeHurricane iri kuitika ku ... * Maodzanyemba maodzanyemba e Long Island kubva kuMoto Island Inlet kuenda kuMontanauk Point * Kumahombekombe ekuchamhembe kweLong Island kubva kuPort Jefferson Harbor kuenda kuMontauk Point * New Haven Connecticut kumadokero kweWestport Massachusetts * Block Island A Yambiro yeTropiki Dutu iri kushanda ku ... * Port Jefferson Harbour to kumadokero kweNew Haven Connecticut * Mahombekombe ekumaodzanyemba kweLong Island kubva kumadokero kweFire Island Inlet kuenda kuEast Rockaway Inlet * Westport Massachusetts kuenda kuChatham Massachusetts, kusanganisira Martha's Vineyard neNantucket * Coastal New York neNew J ersey kumadokero kweEast Rockaway Inlet kuenda kuManazquan Inlet, kusanganisira New York City A Storm Surge Yambiro zvinoreva kuti kune njodzi yekutyisidzira hupenyu, kubva mukukwira kwemvura ichifamba ichipinda mukati kubva kumahombekombe egungwa. Nezve kuratidzwa kwenzvimbo dziri panjodzi, ndapota ona iyo National Weather Service Storm Surge Watch / Yambiro Graphic, inowanikwa ku hurricanes.gov. Aya ndiwo mamiriro anotyisidzira hupenyu. Vanhu vari mukati medzimbo idzi vanofanirwa kutora zviito zvese zvakakosha kuchengetedza hupenyu nepfuma kubva mukukwira kwemvura uye mukana wemamwe mamiriro ezvinhu ane njodzi. Kurumidza kutevedzera kubuda uye mimwe mirairo kubva kuvakuru vemunharaunda. Hurricane Yambiro zvinoreva kuti mamiriro echamupupuri anotarisirwa kumwe kunhu munzvimbo yambiro. Yambiro yeTropiki Dutu Rinoreva kuti mamiriro ekunze emvura inopisa anotarisirwa kumwe kunhu mukati mekuyambira. Storm Surge Watch inoreva kuti pane mukana wekutyisidzirwa nehupenyu, kubva pakukwira kwemvura ichifamba ichipinda mukati kubva kumahombekombe. Nezve kuratidzwa kwenzvimbo dziri panjodzi, ndapota ona iyo National Weather Service Storm Surge Watch / Yambiro Graphic, inowanikwa ku hurricanes.gov. Kufarira kune imwe nzvimbo kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUS kunofanirwa kutarisa kufambira mberi kwaHenri. Nezve dutu ruzivo rwakanangana nenharaunda yako, kusanganisira zvinokwanisika zvemukati mawatch uye yambiro, ndapota tarisa zvigadzirwa zvakaburitswa nemunharaunda yako yeNational Weather Service hofisi yekufungidzira.